दुई पाङ्ग्रे सवारीमा व्यापक कर कटौती, कुन मोटरसाइकलको कति मूल्य घट्यो ? - Nepali in Australia
June 3, 2021 EditorLeaveaComment on दुई पाङ्ग्रे सवारीमा व्यापक कर कटौती, कुन मोटरसाइकलको कति मूल्य घट्यो ?
सरकारले बजेटमार्फत दुई पाङ्ग्रे सवारीमा लाग्ने करको दरमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । गत शनिबार अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लाग्ने सडक दस्तुरमा अधिकतम १ लाख सम्मको छुटको घोषणा गरेको हो ।
देख्दा मात्र गुड लक हुने १९० बर्षको कछुवा, यही नै हो अहिले सम्मको जिवित सबैभन्दा जेठो जीव
आजदेखि दशैंका लागि नयाँ नोट साट्न पाइने, कहाँबाट कसरी लिने ?
September 20, 2021 auther
यो बैंकबाट पाउनुहोस् बिना धितो १५ लाखसम्म ऋण, के छन् सर्तहरु ?